डा.गोविन्द केसीलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर काठमाडौं पठाएको छ । उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौं पठाइएको हो ।
जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाकाे माग गर्दै काठमाडाैंमा बिहीबार पनि र्‍याली र प्रदर्शन भएकाे छ । माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली र प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, चिकित्सकलगायत विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति सहभागी छन् ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१३ गोबरगाढाका बासिन्दा ६ दिनयता पानी माथि बस्न बाध्य छन् । घर, अाँगन सबै जलमग्न भए पछि उनीहरु बगिरहेको पानी माथि खाट राखेर बसेका छन् ।
जाजरकोटको वारेकोट भेकबाट आउने भेरी नदीको सहायक नलसिंहगाडले हरेक वर्षातमा दाउरा बगाएर ल्याउँछ । यसरी बगाएर ल्याउने दाउरा तल्लो तटीय गाउँवस्तीका बासिन्दाहरुका लागि इन्धनको स्रोत हो । त्यही दाउराको लागि उनीहरुले ज्यान जोखिममा पार्छन् ।
खुलामञ्च राजधानीको मुटुमा रहेको एक मात्र खुलास्थल । राजनीतिक परिवर्तनदेखि अन्य धेरै प्रकारका साँस्कृतिक अवयवहरुको साक्षी बन्दै आएको ठाउँ ।
नेपाल प्रहरीले बालुवाटारबाट अधिकारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेको छ । सरकारका स्वतन्त्रता विरोधी नीति र स्वेच्छाचारी निर्णय विरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा शनिबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आयोजित शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शन कार्यक्रममा ३२ जना अधिकारकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
डा. केसीकाे समर्थनमा बृहत प्रदर्शन (फोटोफिचर)
अतुल मिश्र, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
दुई सातादेखि जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा राजधानीमा प्रदर्शन गरिएकाे छ । डा. केसीकाे जीवन रक्षाकालागि सरकारले ठोस कदम अगाडि नबढाएको भन्दै शनिबार र्‍याली र प्रदर्शन गरिएकाे हाे । प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, चिकित्सक लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा अावद्ध ब्यक्ति सहभागी छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीहरूले शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामै बहिरंग (ओपीडी) सेवा सुरु गरेका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको माग गर्दै १४ औं दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनसहित उनीहरुले मण्डलामा प्रदर्शन तथा ‌‌ओपीडी सेवा दिएका हुन् । यसरी गरियो मण्डलामै ओपीडी सेवा ।
लिला श्रेष्ठ, तस्बिर : अंगद ढकाल
लगातारको वर्षाले भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । वर्षाका कारण सयौ घर, विद्यालय, अस्पताल र मठमन्दिरहरू डुबानमा परेका छन् । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार क्षेत्र, राधेराधे क्षेत्र, निकोसेरा, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती, लिवाली क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा परेका छन् ।
बुधबार राति देखिकाे वर्षाले भक्तपुर क्षेत्रका डुबानमा परेकाकाे उद्धार जारी छ । बिहीबार बिहानै देखि उद्धारकर्ताहरु खटिएका छन् । भक्तपुरकाे राधे राधे, ठिमी, जगाती लगायतका क्षेत्रमा डुबानले बढी प्रभावित बनाएकाे छ । सुरक्षाकर्मीले राधे राधे क्षेत्रबाट केहीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानमा सारेकाे छ ।
बुधबार राति देखिकाे वर्षाका कारण उपत्यकाका बिभिन्न भाग जलमग्न भएका छन् ।भक्तपुरकाे राधे राधे, ठिमी, जगाती लगायतका क्षेत्रमा बाढी पसेकाे छ । डुबानका कारण कतिपय घरमा पानी पसेकाे छ ।
बलराम के.सी वैशाख २४, २०७८